Usoro ohuru maka Coronavirus dị na Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraIhe ohuru maka Coronavirus na abia Ankara
23 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Cakpachara anya maka coronavirus ọhụrụ dị na Ankara
Obodo Ankara na-aga n'ihu na-eme ihe n'ime oke iji luso ọgụ coronavirus. Site na nkuzi nke onye isi obodo ukwu Mansur Yavas, ewepụtara mkpebi ịdọ aka na ntị ọhụrụ. N’enye ndi mmadu idebe ihe ọcha na idebe ocha site na ubochi mbu, Büyükşehir na-akwado ndu mmadu na idebe ihe ocha. Iji gbochie mgbasa nke ọrịa ahụ ma kpuchido ahụike nke ụmụ amaala anyị karịa afọ 65, ejiriwo ihe ndị eji ụgbọ njem ọha na-eme ihe karịrị afọ 65 kwụsịtụ maka obere oge. Ndị ọrụ ahụike nwere ike irite uru na bọs EGO, Metro na ANKARAY n'efu site n'igosipụta njirimara ha. E kenyere ndị ọrụ ahụike ụgbọ elu Ankara City Hospital na Bilkent otu ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ. Ìhè ọgwugwu nke Obodo; Metro, ANKARAY na bọs na-aga n’ihu na-emebi ihe na dolams na tagzi.
N’ikwekọ na ntuzi aka nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş, etinyere ụkpụrụ na usoro ọhụrụ n’ihi ntiwapụ nke Coronavirus (Covid-19).
Obodo ukwu na-aga n’ihu na-arụ ọrụ 7/24 nke dabere n’agha ọgụ nke ọrịa oria n’isi obodo niile.
EGO LOGISTI SI KARANTINA REGION
Ngalaba nke Ahụike na-enye nkwado mpaghara ihe onwunwe dị ka nke ọma yana ịnye ọrụ nhicha na ịdị ọcha na mpaghara mpaghara Gölbaşı.
Inye ngwongwo 4 nke ogwu na ihe nkwado ndu site na ihe ECG rue igwe onyu, ihe nkpuchi nye injector, Obodo Ime Obodo na-eme ka ndi oru 200 di njikere na mpaghara. Seyfettin Aslan, Onye Isi Ngalaba Ahụike kwuru na ha na-akwado nkwado maka ụlọ obibi Gölbaşı, ebe ụmụ amaala na-esite na olile anya, na-akwado kemgbe ụbọchị mbụ wee kesaa ozi ndị a:
“Dịka Onye isi oche Ankara Obodo, anyị na ndị otu anyị nọ ebe a kemgbe nnyefe nke ụmụ amaala na-abịa olileanya. Nkwado anyị na-aga n'ihu. Anyị na ndị nnọchi anya ndị osote gọvanọ nọ na-akpachi anya. Na nnọchite nke Obodo ukwu, anyị nyefere enyi nke onye isi anyị ngalaba maka oche nsogbu ebe a. N'ebe iru mmekpa ahụ, nkwado nke Metropolitan karịrị mpaghara a. Taa, anyị bịara ọzọ izute nhicha, ọgwụ na mkpa kwa ụbọchị nke ụlọ 1500 niile. Anyị wetara enyemaka enyemaka anyị, gụnyere ihe karịrị otu ton nke ihe na-emebi emebi, karịa otu ton nke ịcha ọcha, ihe karịrị puku afọ iri, ihe karịrị puku kwuru puku, puku puku abụọ, ihe karịrị puku abụọ. Anyị na-anwa imezu ihe ndị osote onye gọvanọ anyị chọrọ n'ụzọ kachasị ọsọ. Ndị osote gọvanọ anyị kelekwara Onye isi obodo anyị Mansur Yavas na Obodo Isi Obodo. ”
Mkpochapu obodo ANYANW K KANANTINA N'ỌR 100 XNUMX nwụrụ
Aslan kwuru na ha na-agụta ihe mkpofu na mpaghara kwụrụ dị ka mkpofu ahụike. "Obodo Ankara Nnabata obodo ahụ bụ ihe mkpofu. Anyi n’icpo ahihia na mpaghara a otu puku nari. Citizensmụ amaala anyị ekwesịghị ichegbu ya. Dị ka Obodo ukwu, anyị na-enye nkwado na ọrụ niile na mpaghara kwarantaini. ”
Kpọ oku n'ụlọ maka ụmụ amaala iri isii na ise wee gbagowe
Onye isi obodo Ankara Mịnịsta Mansur Yavaş kpebiri ịkwụsị nwa amaala niile dị afọ iri isii na ise nwa oge iji nweta ohere ịnya ụgbọ ala ọha niile mgbe ha kpọchara Ankara nọrọ n'ụlọ iji gbochie ọrịa na iyi egwu coronavirus ma gbochie nje ịgbasa. ọ natara.
Mayor Javaş mere ka amata na n’agbata ụbọchị 16-20 nke Mach, nkezi nke ụmụ amaala 65 puku 55 dị afọ 739 na karịa na-eji ụgbọ njem ọha, na n’okpuru edemede 5393 nke Iwu Obodo Nọ 38 akpọrọ “Ọrụ na ikike nke onyeisi obodo” Dika ihe eji akpachapụ anya, ọ kwụsịtụrụ ojiji iji ụgbọ ala niile na - akwụghị ụgwọ maka ụmụ amaala karịrị afọ iri isii na ise ka ha wee kpachara anya wee nwee ike ichekwa ahụike ọha n'usoro nke "iwere usoro dị mkpa maka ọdịmma, ahụike na obi ụtọ".
EGO NA-EGO NA-EGO NA-AHAL AHAĹ
Ekwuputala na Ankara Obodo ukwu na ndị ọrụ ahụ ike nwere ike irite uru n'ụgbọ njem ndị njem ọha na-akwụghị ụgwọ site n'igosi njirimara ha.
Dịka akụkụ nke ọgụ megide coronavirus, ndị ọrụ ahụike ga-enwe ike iji ụgbọ ala EGO, Metro na ANKARAY n'efu.
Site na ntuzi aka nke President Yavaş, ewezuga ngwa njem ụgbọ ala ọha na-akwụghị ụgwọ maka ndị ọrụ ahụike niile, buszọ ụgbọ ala Ankara City 112 maka ndị ọrụ ahụike ga-ekenye ọrụ ụgbọ ala elekere kwa elekere.
A ga-edere Ndị Ọrụ Ahụike Ahụike na fọm nke bọs anyị nke a ga-egosipụta site n’igosipụta ndị ọkachamara banyere ahụike.
Usesgbọ ala ụgbọ ala na-alaghachi na Eski Roadehir Road, Kızılay, Sıhhiye, Opera, Ulus Road n'ihu TBMM, na okporo ụzọ Istanbul n'ihu TBMM kwa elekere, malite na 22.03.2020, na 07.00 n'ụtụtụ. Zilọ ọgwụ Gazi AŞTİ na AŞTİ ga-eme mgbanaka dịka Hospitallọ Ọgwụ City ọzọ.
Naanị ndị ọrụ ahụike na-arụ ọrụ na Hospitallọ Ọgwụ City ga-ebu bọs ahụ site n'igosipụta njirimara ha, a gaghịkwa ebugharị ndị njem ọzọ.
Ndị ọrụ uwe ojii na-achịkwa ọrụ ndị na-agbazere, nke na-aga n'ihu na tagzi na obere obere n'akụkụ isi obodo ahụ.
Emperor Sevinç, onye na-arụ ọrụ na Sincan Yenikent Taxi Station, kwuru, “Anyị na-ekele onye isi ala Mansur maka nkwado ha. Ndị njem anyị nwekwara obi ụtọ na ngwa a maka anyị ndị ọkwọ ụgbọala. Anyị anaghị enweta mkpesa. ” Onye na-anya Taksi Ali Özçelik kwuru, "Anyị nwere nnukwu obi ụtọ n'ọrụ a nke Obodo. Enwere olile anya na anyị ga-alanahụ ụbọchị ndị a. Ana m ekele gị Onye isi Ala Mansur anyị. ” Murat Cebe, onye ọzọ na-azụ taksi bụ onye kwụsịrị tagzi ya na Sincan Pleven Taxi Station, kwuru, "Anyị nwere nnukwu obi ụtọ na ngwa ahụ. Ka Allah nwee obi uto na ndi isi obodo anyi na ndi isi obodo anyi. Anyị na-aga n’ihu ọrụ anyị. Ha na-enyere anyị aka n'okwu niile. Chineke gọzie ha niile. ”O kwupụtara afọ ojuju ya.
Na-ekwupụta na ha na-eje ozi na Mamak Ege Mahallesi Dolmus Bus Stop, Yiğit Yılmaz kwuru, “Anọwo m na-arụ ọrụ na nkwụsị a ruo afọ 8. Ekele dịrị Onye Isi Obodo anyị, ha enyerela aka maka ịdị ọcha nke ugbo ala. Vehiclesgbọala anyị na-agbagha kwa ụbọchị. Anyị na-eme nhicha anyị ruo ókè ike kwere anyị, ”ka ndị ọkwọ ụgbọala obere ụgbọala ndị ritere uru na ọrụ ahụ kwuru, sị:
Kubilay Cihan:“Nke mbu, anyị ga-achọ ịkele anyị Mayor maka omume a. Vehiclesgbọala anyị na - abarụ n’otu n’otu maka ahụike nke ndị njem anyị. Obi dị anyị ụtọ na ọrụ a. "
Cengiz Koç: Afọ iri atọ na ise m bụ onye ọkwọ ụgbọ ala. Ọ bụ oge mbụ anyị nwere ụdị ihe a. Anyị na-egosi mbọ anyị niile. Ngwa a dị ezigbo mma maka ichedo ahụike nke ndị njem na ndị ọkwọ ụgbọala. "
Ngalaba ọhụrụ na Samsun | SAMULAŞ
New Circuit Prevention na Ígwè na ígwè
Kayseri Ngwá Ọrụ Snow Machines na Snow Crushers Echere n'aka ndị Germany
Minista Locomotive nke Gọọmenti: Red Crescent-Çayyolu Metro
TCDD 6.Alo 131 na Ngalaba
Istanbul-Eskişehir YHT na-arụ ọrụ mgbe ọnwa 1.5 gasịrị
Hospitallọ Ọgwụ Ankara City
Na-alụ ọgụ coronavirus
ahụike ndị ọrụ ahụike
Usoro mmeghachi omume mberede maka osimiri
Nchebe elu maka ọwara Eurasia akwadoro
3. Àkwà jikọtara okporo ụzọ na Prime Ministry